I-Led Corn Lamp, i-Corn Cob Led Lights, i-Corn Cob Led Abavelisi kunye nabathengi baseChina
Inkcazo:I-Led Corn Lamp,Imibala yeCow Cob Led,ICob Ced Led,Isibhamo sokuKhanya kweMbewu,,
Home > Imveliso > Iimbewu zeBlue Corn > I-Led Corn Lamp
Iintlobo zeMveliso ze- I-Led Corn Lamp , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-Led Corn Lamp , Imibala yeCow Cob Led ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
150w I-Led Corn Cob Lamp Bulb 19500lm  Qhagamshelana Ngoku
ILampu yeBlue Bulb ye-120 Watt Led Corn 15600lm  Qhagamshelana Ngoku
100 Watt Led Corn Light Lamp 13000lm  Qhagamshelana Ngoku
I-480v i-Led Corn Cob Itampu elinganayo 60W E27  Qhagamshelana Ngoku
480v 40w I-Bulb Corn Corn E39 E40  Qhagamshelana Ngoku
30W E27 I-Cob Led Led Lamp 4000K  Qhagamshelana Ngoku
I-30W i-Corner Light Corn Bulb ye-HPS 100W  Qhagamshelana Ngoku
50W Led Corn Bulb 175W I-Metal Halide Equivalent  Qhagamshelana Ngoku
I-DLC iLed Corn Light 60W yeGaraji lokuPaka  Qhagamshelana Ngoku
60W Led Light Light Lamp E27 7200LM  Qhagamshelana Ngoku
I-E40 40W i-Corned Light Bulb 4800LM  Qhagamshelana Ngoku
40W ILamp Lampu 100W i-Metal Halide Replacement  Qhagamshelana Ngoku
I-E27 80 I-Watt Led Corn Lamp Inqabunga Lens  Qhagamshelana Ngoku
I-60W yeLamp Lamp  Qhagamshelana Ngoku
I-ETL iPramram Led Corn Lamp 30W  Qhagamshelana Ngoku
I- 150w yeLampu yeMbewu Ngama-19500Lm 4100k 5000K kunye ne-E27 E39 iscket, elinganayo ne-500W incandescent bulb kunye neMH HPS. I-aluminium yokufa kunye ne-sink yokufudumala ishushu iyasiza ukutshabalalisa ukushisa, ukwandisa ubomi beLed Corn Bulb...
I- Led Corn Lamp 120w i-15600Lm 4100k 5000K kunye ne-E27 E39 iscket, elingana ne-400W incandescent bulb kunye neMH HPS. I-aluminium yokufa kunye ne-sink yokufudumala ishushu iyakwenza ukutshatyalaliswa kwentsha, kwandisa ixesha lokuphila kweLampu...
ILamp Lampu Led 100w i-13000Lm 4100k 5000K kunye ne-E27 E39 iscket, elingana ne-300W incbescentcent bulb kunye ne-HH HPS. Isiseko se-aluminium sokufa kunye ne-sink yokushisa kusinceda ukutshatyalaliswa kwentshatshalo, kwandisa ixesha lokuphila...
I-60W yeLampu yeLimi E27 i-7800Lm 5000K ne-E27 E39 iscket, elingana ne-175W incandescent bulb kunye neMH HPS. Isiseko se-aluminium sokufa kunye ne-sink yokushisa kusinceda ukutshatyalaliswa kwentsha, kwandisa ixesha le-60W yeLanga leLanga...
I- 0 0w I-Bulb Corn Corn E39 i-5200Lm 5000K kunye ne-E27 E39 iscket, elinganayo ne-120W incandescent bulb kunye neMH HPS. Isiseko se-aluminium sokufa kunye ne-sink yokushisa kusinceda ukutshatyalaliswa kwentsha, kwandisa ixesha le-40W Led Corn Cob...
I-30W yeLamp Lamp Led Led i-3900Lm 5000K kunye ne-E27 E40 iscket, elingana ne-100W incandescent bulb kunye neMH HPS. Isiseko se-aluminium sokufa kunye ne-sink yokushisa kusinceda ukutshatyalaliswa kwentsha, kwandisa ixesha lokuphila kweLampula ye-...
Ixabiso lento: USD 16.9 - 17.9 / Piece/Pieces
I-Bbier 30W Led Bulb Corn i-3600Lm 5000K kunye ne-E27 E40 iscket, elinganayo ne-100W incandescent bulb kunye neMH HPS. I-aluminium yokufa kunye ne-sink yokufudumala ukushisa kukunceda ukutshabalalisa ukushisa, kwandisa ixesha le- 30W Led Corn Light...
Ixabiso lento: USD 31.99 - 33.99 / Piece/Pieces
I-Bbier ibonisa ukuba i- 50W Led Corn Bulb ishintshwe nge-HW, i-Metal Halide kunye ne-CFL bulbs. Le 175 Watt Metal Halide iLed Equivalent equkethe ngaphezulu kwama-7500 amaLumens of output. I- 175 Watt Led Bulb yethu isebenza ngokugqibeleleyo...
Lo Mbane wokuKhanya we-Corner 60W ulungelelaniso lwe-compact design uhlinzeka ngokubanzi, nokuba kufakwe ukukhanya xa i- Led Corn Bulb yethu 60W ifakwe kwi-HID yangaphambili ye-Fixtures I-Bbier ye- 60 Watt Led Corn Bulb kulula ukuyifaka, ukubuyiswa...
Ixabiso lento: USD 22.99 - 24.99 / Piece/Pieces
I- 60W Led Corn Lamp yethu ingasindisa i-90% ekusebenziseni umbane xa kuthelekiswa nokukhanya kwe-sodium. 60W Led Corn Light ifike kwi-7200 Lumens eqaqambileyo kwaye ingathatha indawo ye-175 Watt Metal Halide / HID / HPS ukukhanya. Lo Mbane...
I-Bbier 40W i- Corned Bulb iyalingana ne-bulb incandescent ye-120W, i-4800 lumen ukukhanya okukhulu, ugcine ufike kuma-80% weendleko zombane ngokuthelekiswa nokukhanya kwe-incandescent. Ukukhanya koMngqomo wama-40W okuyi-40W kwenziwa ngokukhenkcezwa...
I-Bbier 40W yeLampu yeMbewu yindawo yokuhamba nge-ballast ephezulu, i-bay ephantsi okanye i-post top applications. I-Ballast kufuneka iqhutywe xa ikhona. Le ngqayi ye- 40 Watt Led Corn bul ubeka kwi-100W HID, i-100W i-fluorescent kunye ne-100W...
Ixabiso lento: USD 33 - 35 / Piece/Pieces
UKUPHATHWA KWEENKQUBO: Ukulondoloza ama-85% kwiimali zakho zamandla-mali! I-Bbier 80W yeLampu yeMbewu inikezela ukutshintshwa ngokufanelekileyo kwama-bulb akho angama-250w angama-incandescent bulbs ngo-80 watt kuphela ukukhanya kwe-LED. ISIFUNDO...
175W Metal Halide Led Retrofit : ezifanelekileyo kwiindawo ezifakwe kuyo.CHECK I-SIZE! QINISELISA KWEENKQUBO ZAKHO IMALI YAKHO! 175 Watt Metal Halide Led Retrofit : ETL kunye neDLC zidweliswe.I-ETL yethu ibhalwe kwi- 175 Watt Led Equivalent idibana...
Ixabiso lento: USD 22 - 24 / Piece/Pieces
Ukukhanya okucokisekileyo kunye nokugcina amandla: Le ngqolowa yeLed 30W ingu-9000Lm nge-100W ye-LED incandescent bulb esikhundleni. I- 30W Led Corn Lamp iyasebenza ngamandla kwaye igcina ibhajethi yakho yombane. Ukukhanya okukhawulezileyo : I- Lamp...
KwiChina I-Led Corn Lamp Abaxhasi
Izibane ze-corn zitshintsha indlela esicinga ngayo ngokukhanyisa okuphezulu. I-Led Corn Lamp yindawo enkulu yokutshintshwa kwezibane zokupaka. Phinda ubuyekeze izilungiso zakho zeHID ezidlulileyo ngeeMbane eziLungileyo zeMigodi yeCock Cob Led kwiindawo eziphakamileyo, iindawo eziphantsi, izithuba eziphezulu, izithuba zeposi, kunye ne-PAR 38 . I-Corn Cob iLow Light for Public has a high efficiency kwaye inexabiso elincinci lokugcina .
I-Led Corn Lamp Imibala yeCow Cob Led ICob Ced Led Isibhamo sokuKhanya kweMbewu I-Led Corn Lamp E40